Rooble iyo madaxda maamul goboleedyada oo ‘Beesha Caalamka’ dhaqaale weydiisanaya. #Somalia – Somalimirror.net
Dugsiga Abaarso ayaa laga hirgeliyey 2009-kii galbeedka magaalada Hargeysa, dugsiga ayaa markii ugu horraysay ahaa dugsi sare oo keliya( Secondary School) markii dambe se yeeshay qayb dhexe iyo jaamacad. Aas aasaha dugsigu waa nin mareykan ah oo layidhaa Jonathan Star.
Haddaba markii dugsigaas la aas aasey illaa maanta waxa ka qalin jabiyey ardey badan oo jaamacado loogu kala direy dibedaha, siiba waddamada Yurub iyo Mareykan. Inta ugu badan ardayda dugsigaas ka soo baxdaa waxa ay cadaawad wayn u muujiyaan diintooda islaamka isla markaana wax ay bulshadooda ku tilmaamaan dad jaahiliin ah oo dambeeya.
Hablaha dugsigaas ka baxa waxa la arkaa iyaga oo xijaabkii tuuray isla markaana gaalo ku dhexjira. Arrinta se aadka loola yaabey wax ay ahayd markii ninka Qawmu-luudka ku caan baxay wariyahana ka ah CNN uu booqasho ku tagay dugsigaas sannadkii 2016. Waxa baraha bulshada lagu arkayay haddana laga heli karaa khaniiskaas oo la sawiran hablo soomaaliyeed iyo isagoo weliba khudbado u jeedinaya ardayda iskuulkaas.
Haddaba 16 Ogos, 2021 ayaa madaxweynaha Somaliland khudbad uu ka jeediyey Jaamacadda Barwaaqo oo raacsan dugsiga Abaarso uu ku difaacay dugsigaas, isla markaana waxa uu sheegay in dad maskaxdoodu aanay taam ahayni wax ka sheegaan dugsiga. Waxa kale oo uu intaas ku daray in uu dugsiga cagihiisa ku tegay isla jeerkaasna dugsigu uu islaamka iyo Somaliland-ba wax u tari doono.
Khudbaddaas oo dadka aad uga yaabisay ayuu Cabdimaalik Muuse Coldoon gorfeeyay, waxa uu sheegay in aaney sinaba suurta gal u ahayn in madaxweynuhu difaaco dugsi noocaas ah, laakiin arrinta dabka baasiin ku sii qabatey wax ay ahayd kaddib markii Cabdimaalik soo ogaadey in guddoomiya jaamacaddu ay tahay habar diinta kiristaanka faafisa isla markaana ah baaderiyad Neyjeeriyaan ah oo lagu magacaabo Joy Isa ama Pastor Joy Isa. Ereyga Pastor waa af ingiriisi wax aanu u dhigmaa wadaad. Ugu dambayn xaley oo ay bishu ahayd 19 Ogoosto, 2021 ayaa magaalad Burco laga qafaashey Cabdimaalik Coldoon kaddibna loo qaadey magaalada Hargeysa halkaas oo la sheegay in looga sii gudbiyey xabsiga Madheera.
Previous PostCNN ayaa wuxu leeyahay Afghanistan waxa laga helaa nooc macdinta dhulka ah oo naadir ah,
Next PostCiidamo lagu qarxiyay Jannaale iyo weerar ka dhacay Waajid